बिजयेन्द्रले श्वेतालाई साइकल सिकाउँदै; साइकल बाट झण्डै ल”डिन श्वेता(भिडियो सहित) – Khabaarpati
December 16, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on बिजयेन्द्रले श्वेतालाई साइकल सिकाउँदै; साइकल बाट झण्डै ल”डिन श्वेता(भिडियो सहित)
पछिल्लो समय अझ बढी चर्चा कमाएकी नायीका श्वेता खड्का अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल नै भइरहेकी छिन । धनगढीका अर्वपती ब्यबसायीका छोरा विजयेन्द्र सिंह राउतसँग धुमधामले विबाह गरेसँगै अहिले उनी समाचार र युट्युवमा ट्रेण्डिग लिस्टमा परिरहेकी छिन।
विबाहपछि श्वेता अहिले पारिवारिक भेटघाट र मन्दिर भ्रमण-दर्शमा पनि ब्यस्त रहेकी छिन् । उनका अहिले यी तस्वीरहरु सामाजिक संजाल भरी भाइरल नै बनेका छन । श्वेताले भर्खरै मात्र आफ्ना पतिसँग मन्दिर दर्शनका लागि गएका तस्विर र भिडियोहरु सामाजिक संजालमा अप्लोड गर्‍की थिइन । अहिले यी तस्वीर र भिडियोहरु सामाजिक संजालभरी भाइरल नै बनिरहेका छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
त्यस्तै पछिल्लो समयमा श्वेताको एउटा भिडियो सामाजिक संजाल मा भाइरल बनिरहेको छ । त्यो हो, श्वेताले आफ्ना पति बिजयेन्द्र संग साइकल सिकिरहेको । भिडियोमा श्वेता का पति बिजेन्द्रले श्वेतालाई खुव मजासंग साइकल सिकाइरहेको देख्न सकिन्छ । अब प्रस्तुत छ उक्त भिडियो । भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ।
छोरी म छिट्टै नेपाल आउँदै छु भनेको केहि दिनमै कुवेतमानै अस्ताए डम्बर बहादुर साउद
हालै विवाह गरेकी चर्चित गायिका नेहा कक्कडलाई मिल्यो यति ठुलो सफलता
आखिर यी छोरा ले के गरे ? आमाले भनिन :‘यस्तो छोरालाई जन्म दिने भगवानको पनि आँखा अ न्धो हुनुपर्छ (भिडियो)
आहा ! बेहुला बेहुलिले आफै गित गाउदै छमछमि यसरि नाचे (हेर्नुस् भिडियो )